Ọdịnaya dị nwa oge, ntụkwasị obi na ikwesị ntụkwasị obi na-adịgide adịgide | Martech Zone
Ọdịnaya dị nwa oge, ntụkwasị obi na iguzosi ike n'ezi ihe na-adịgide
Wednesday, December 3, 2014 Tọzdee, Disemba 4, 2014 Douglas Karr
Izu ole na ole gara aga anọghị m n’obodo ma achọghị inyefe oge dị ukwuu iji dee ọdịnaya ka m na-agakarị. Kama ịtụfu ụfọdụ ịnyịnya ibu, amaara m na ọ bụ oge ezumike maka ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ m yana m họọrọ ịghara ide kwa ụbọchị. Mgbe idechara afọ iri, nke ahụ bụ ụdị ihe na - eme m nzuzu - ide ihe bụ akụkụ nke onye m bụ, ọ bụghị naanị ihe m na - eme.
Ọtụtụ ndị na-agba mgba n'ezie banyere ide ọdịnaya. Ọ na-esiri ụfọdụ ike ịmezu okwu ha, ụfọdụ na-esiri ha ike iche echiche banyere ihe ha ga-ede, ma ndị ọzọ anaghị amasị ya. Ọdịnaya na-abụ ọkpụkpọ akụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbalị ọ bụla ị na-eme n'ịntanetị… na ịdebe mmeri ahụ nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu.
Na nwute, ịmara oke ọdịnaya bụ ụzọ iji wulite azụmaahịa ha - ụfọdụ ụfọdụ na-ezu ohi. O yikwara ka ọ na-agbasokarị.
Akara Schaeffer edere na Facebook n'oge na-adịbeghị anya:
Mgbe m mikpuru n'ime ụwa dijitalụ a ọtụtụ afọ, ekpebisiri m ike na ịkwa ụda bụ ụzọ ọrụ ziri ezi. Ọbụna ụfọdụ "gurus" kachasị elu emeela ụdị ha site na izu ohi. Ọ dịghị onye yiri ka ọ hụrụ. Enwere ọtụtụ ihe akaebe gbakọtara iji kwupụta na nke a bụ ụzọ bara uru iji nwee ihe ịga nke ọma. Mgbe ụfọdụ, m ga-tuo onwe m ịmata na ụwa a dị adị na etu obere ụkpụrụ ọma ma ọ bụ echiche dị nkenke siri dị mkpa.
Nke a bụ tiori m. Afọ ndị gara aga ndị na-esichaghị ike ka nwere ike ịme nke ọma na azụmaahịa site na njikọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Na weebụ, ọ dịghị nke na-arụ ọrụ. Yabụ iji dịrị ndụ, ha ga-ezuru ọdịnaya na echiche nke ndị ọzọ iji yie ndị nwere ikike na ndị nwere ọgụgụ isi. Ntanetị buru ibu ma churn dị oke nke na ịbụ adịgboroja nwere ike ịrụ ọrụ ogologo oge, ọbụlagodi na ụfọdụ ndị na-achọpụta ya. Nke a bụ ụdị azụmaahịa ọhụụ.
Steve Woodruff ahụkwara iji mkparị:
Ọdịnaya / ahịa geeks na-aga n'ihu na-ekwu maka mgbasa ozi akwụ ụgwọ, nke a na nke akwụ ụgwọ. Onye ọ bụla na-eleghara mgbasa ozi gbaziri, Ihihie, na Ihere. Echere m na enwere ike inweta ohere ahia there
Oge adighi anya, echetakwara m Tom Webster igosipụta ebe mmadụ wepụrụ akara ngosipụta nke ụlọ ọrụ ya na ụfọdụ eserese kesara ka ha na-ekesara ha na ntanetị.
Y’oburu na ibu onye agu akwukwo a ogologo oge, I gha achoputa m kewaa otutu ihe ndi ozo. Ana m edozi ọdịnaya ọ bụla kwa ụbọchị - site na nsonye, ​​site na ndị enyi, yana site na nkọwa na ihe ngosi. M na-ejikọta azụ na saịtị ha, na-ehota aha ha n'ime ọdịnaya (dịka m mere n'elu) na ọbụna na-akpali ndị na-ege m ntị ka ha chọọ isi ihe ọmụma ndị a.
Ndị na-ege m ntị na-eji ọdịnaya a akpọrọ ihe… ma ọ bụ na enweghị m isi iyi nke ọdịnaya ahụ enweghị isi na ha. N'ezie, ekwenyere m na m na-eme ka ha mata ọtụtụ ndị ọkachamara ụlọ ọrụ, ụdị, ngwaahịa na ọrụ nke ntụkwasị obi m na ikike m etolitegodi na ndị na - agụ akwụkwọ m.
Ọ bụghị naanị uru dị na ozi m na-ebu n'aka ha n'aka gị, ọ bụkwa nkwanye ugwu na mmekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ na-akwụ m ụgwọ uru. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ele ndị ọgbọ ha anya dị ka asọmpi mgbe ha kwesịrị ile ha anya dị ka ndị ndụmọdụ, ndị nkuzi, akụrụngwa yana ọbụlagodi ndị enyi ụlọ ọrụ.
Ọ bụ nkwenye m na inye otuto maka echiche na okwu ndị ọzọ abụghị naanị ihe kwesiri ime, ọ na-emekwa ka ndị na-agụ akwụkwọ gị nwee mmetụta nke ụdị mmadụ ị bụ. Ọdịnaya ahụ ị na-eche maka ibiri ma ọ bụ izu ohi kpam kpam bụ naanị nwa oge… mana iguzosi ike n'ezi ihe gị na mmetụta ị na-enwe n'ahụ ndị ọzọ ga-anọnyere gị ogologo oge.
Ozugbo ị tụfuru ntụkwasị obi mmadụ, ọ ga-afọ nke nta ka ọ bụrụ na ị gaghị eweghachi ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla m na-anata arịrịọ iji jiri ọdịnaya anyị mepụtara - ụfọdụ n'ime akwụkwọ, akwụkwọ ịma ọkwa, na akwụkwọ akụkọ ọcha, wdg. Agatụbeghị m mgbe a jụrụ m na anaghị m ebubo onye ọ bụla ime nke a. Enwere m ekele naanị na m na-eru ndị na-ege ntị ọhụrụ na ndị sara mbara karị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa izu, achọpụtara m ọdịnaya m na saịtị ndị na-ezu ohi ma ana m eme ihe niile m nwere ike ime iji kwụsị ha. Agaghị m azụ ahịa ma ọ bụ nyere ndị ahụ aka.
Ya mere… oge ọzọ ị na-rapaara na-achọ gbaziri ọdịnaya ma ọ bụ ọbụna naanị echiche ma ọ bụ echiche nke onye ọzọ rụrụ iji mepụta, kama kesaa ya ma nye onye okike ihe ngosi! Ọ ga-eju gị anya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, etu o si dị mma, na ịkwanyere gị na ndị ọgbọ gị ùgwù.
Ọ dịghịkwa mkpa ịhapụ ịkwụwa aka ọtọ gị iji mee ya.
Tags: content Marketingikwesị ntụkwasị obiakara schaefferezuru ọdịnayasteve woodruffTom webster
Etu esi ewepu Twitter maka mmemme ọzọ gị
AddThis Na-agbakwunye Icheta Onwe Onye iji Meziwanye Njikọ Aka, Ntugharị na Ego
Dee 8, 2014 na 11: 47 AM
Dịka onye edemede, ejiri m n'aka na ị nwere ọtụtụ okwu ịhọrọ. M ga-enwekwu mmasị n'ihe ị ga-ekwu ma ọ bụrụ na ị ga-ada ụda okwu rụrụ arụ dị ka "Half-Ass" Amaara m na ọ ghọwo okwu a na-anụkarị maka mbọ ọkara, adịghị mma, mana ọ na-ewe m iwe.
Nkwuputa ị biputere nwekwara okwu rere ure. Ọ bụghị n'ezie ihe m na-achọ na email azụmahịa.
Dec 8, 2014 na 9:53 PM
I nwere ikike iwe iwe ma nwee ike wepu aha gị ma ọ bụrụ n’achọ, mana a gaghị m emezi lingo m oge adịghị anya. Ahụghị m okwu rụrụ arụ ma ọlị.